Beeraha dhaqdhaqaaqa ah ee loo yaqaan 'Fork Movement' wuxuu ku koraa Ecuador
EkoRural waxay ku dadaaleysaa inay xoojiso shabakadaha kale ee cuntada ee Central Highlands ee Ecuador si faa'iido loogu sameeyo soo saarayaasha cuntada iyo macaamiisha oo kale. Nidaamyadani waxay ka caawiyaan macaamiisha magaalooyinka Riobamba iyo Salcedo inay helayaan cunto caafimaad leh, cunno maxali ah iyada oo taageereysa soo-saarayaasha u dhow si loo kordhiyo fursadaha suuqa.
Afar sano ee la soo dhaafay, EkoRural wuxuu kor u qaaday xiriirka tooska ah ee u dhaxeeya soosaarayaasha iyo macaamiisha magaalooyinka, iyaga oo dib ugu soo celinaya dabeecadda dhaqanka iyo siyaasadda cuntada iyo saameynta doorashadayada caafimaadka, deegaanka, iyo dhaqaalaha deegaanka. Waxyaabaha ka soo jeeda beelaha kala duwan ee ay wadaagaan waxay ku lug leeyihiin Canastas Comunitarias (oo la mid ah CSAs), toos ah u dhoofinta, iyo beeraha suuqyada, iyagoo walwalaya mar kasta shabakad ballaaran oo xiriir ah shakhsi ahaan iyo wadajir ah oo lala yeesho macaamiisha. Muwaadiniinta magaalooyinka ayaa hadda si toos ah ugu xiran la leh soo saarayaasha miyiga ah si ay u helaan cunto cusub, taas oo kicisa beeralayda si ay u sii wataan wax soo saarka beeraha.
Iyadoo muwaadiniinta reer Ecuador ay maalgalinayaan qiyaastii $ 10 bilyan oo cunto ah iyo cabbitaan sannad kasta, macaamiisha waxay door muhiim ah ka qaadataa kor u qaadida cunto caafimaad leh, go'aamiya waxa la soo saaray iyo sida.
Habka uu cuntada u kordhay-oo leh ama aan lahayn agro-kiimikooyin-waxay udhaqaaqaan caafimaadka beeraleyda, awooddooda si ay u soo saaraan si joogta ah, iyo wanaagga dhulka. Sidaa awgeed, ilaalinta dalagyada beeraha ee dalagga iyo maaraynta waara ee isticmaalka ciidda iyo biyaha ayaa ah arrimo muhiim ah oo ka jira beelaha ay ka shaqeeyaan. Jaaliyadda Basquitay, oo ku taala 3400 mitir sare, ayaa ururku dhawaan sameeyay bangi cusub oo abuuray si loo ilaaliyo loona ballaadhiyo kala duwanaanshaha dalagga hooyo. Maaraynta kala duwanaanshaha bay'ada ee qoysaska iyo bulshadooda waxay taariikh ahaan ku lug leedahay horumarinta qunyar socodka dhaqdhaqaaqyada arrimaha bulshada iyo deegaanka. Tani waxay qoysaska reer miyiga ah u suura galisaa in ay la qabsadaan dhaqdhaqaaqyada iyo khalkhalka beeraha, gaar ahaan kuwa ku xiran cayayaanka, cimilada, iyo isbeddelada suuqyada.
Iyadoo muwaadiniinta reer Ecuador ay maalgalinayaan qiyaastii $ 10 bilyan oo cunto ah iyo cabbitaan sannad kasta, macaamiisha waxay door muhiim ah ka qaadataa kor u qaadida cunto caafimaad leh, go'aamiya waxa la soo saaray iyo sida. EkoRural waxay taageertaa ololaha "Que Rico Es" ee loogu talagalay isticmaalka mas'uulka ah, iyo hadafka hada jira si loo dhiso shabakad ugu yaraan 250,000 oo qoys oo ka go'an in ay cunaan cunto caafimaad leh iyo cunto deegaaneed.